Sii wad. Wax kasta oo aad u baahan tahay ayaa kuu imaan doona waqtiga ugu habboon. - qarsoodi - Quotes Pedia
Waa muhiim in la sii wado. Marar badan, si sax ah ayaan u qaadnaa markii aan nimid nuskeed. Tani waa inaan la qaban. Mid ka mid ah waa inuusan lumin samir iyo rajo kaliya isagoo ka fikiraya mustaqbalka oo naftaada is oranaya waxaa laga yaabaa inaysan u qalmin.
Weligaa ma ogaan kartid markii mucjisooyinku dhacaan, miyaanay ahayn? Haddii aad ilaa imika timid, waa inaad naftaada ku dhiirrigelisaa inaad ku socotid xoogaa mayl dheeri ah illaa aad ka gaadhay yoolalka. Wax kasta oo noloshaada ah oo aad ugu baahan tahay noloshaada waxay kugu imaan doonaan adiga waqtiga kugu habboon.
Waa inaad horay usii waddo. Wax kasta oo aad waligaa u baahatid ayaa kuugu imaan doona waqtiga saxda ah. Waxyaabaha dhaca waxay u dhacaan sidii loogu talagalay oo kale. Shaqadaadu waa inay ilaaliso joogtayntaada, oo waa inaad taas diirada saareysaa oo keliya!
Xusuusnow in kuwa guuleystaa ay yihiin kuwa ka gaabiya laakiin ku adkaysanaya qaabkooda. Hadaad waligaa rabto inaad ku guuleysato waxkasta oo noloshaada ah, waxaad ubaahantahay inaad diirada saarto hadafkaaga oo aad kusii wadid dhankaaga.
Wadadu ma aha inay ahaato mid marwalba siman. Waxaa laga yaabaa inaad u baahatid inaad caqabado badan ka gudubto jidkaaga, laakiin kan guuleysta dhammaantood waa hubaal inuu guuleysto. Adduunyada ma sameyn kartid inay wax kaa beddesho adiga oo raali kuu ah.
Wax walba waxaa loola jeedaa inay u leexdaan iyadoo loo eegayo waqtigooda; isku mid ayaa kuu socda adiga iyo noloshaada sidoo kale. Halkii aad ka jeedin lahayd naftaada hadafka iyo ka fikirka shakiga jira, waxa kugu habboon in aad ku dhiirrigeliso gaaritaanka himilada aad markasta ku riyoonaysay!
Waqti yar ayey qaadan kartaa, laakiin xusuusnow in guusha ay ku timaado kaliya kuwa u adkeysan kara dhibaatooyinka oo dhan oo aan weli rajo dhumin. Wax walba waxay leeyihiin waqti u gooni ah. Ma gaari kartid wax walba ka hor intuusan saacaddu saxsaneyn. Marka, sii wad oo sug ilaa daqiiqadda saxda ah ay ka soo baxeyso!
Xigashooyinka gaagaaban ee ugu wanaagsan Waqtiga oo dhan
Quotes Times adag
Sii wad Go'aannada xigashooyinka
Quotes Waqtiga Saxda ah
Xigashooyin xigmad leh oo ku saabsan Waqtiga
Ku shaqee inaad jacayl la yeelatid qofka muraayadda ku dhex jira oo wax badan soo dhex maray laakiin weli taagan. - Qarsoodi
Ku shaqee inaad jacayl la yeelatid qofka muraayadda dhex jooga oo aad u soo maray laakiinse…
Waxaad tahay qof qiimo leh oo aan la beddeli karin. Haddii waligaa si kale laguu yiraahdo, ha aaminin. - Qarsoodi
Waxaad tahay qof qiimo leh oo aan la beddeli karin. Haddii waligaa si kale laguu yiraahdo, ha aaminin. - Laxiriirta aan lagaran…
Qofka dareemaya in loo mahadceliyey had iyo jeer wuxuu qabanayaa wax ka badan wixii la filayay. - Qarsoodi
Weligaa ha noqon maxbuus taariikhdi hore. Waxay ahayd cashar kaliya, ee ma ahayn xukun xabsi daa'in. - Qarsoodi
Ma jiri karo wax fahan dhab ah oo xaadirka ah iyada oo aan la ogeyn waxa la soo dhaafay, sidaa darteedna…
U dhaaf calaamada cagta ee jacaylka iyo naxariiskastoo aad tagtid. - Qarsoodi
U dhaaf calaamada cagta ee jacaylka iyo naxariiskastoo aad tagtid. - xigashooyinka aan la aqoonsanayn: